11 Sanadood Ka Dib Laba Kooxood Oo Ingiriis Ah Oo Ku Kulmaya Final-ka Champion League Iyo Wacdarihii Ay Ku Dhigeen Barcelona Iyo Ajax | Biyoguurenews.com
Home Wararka 11 Sanadood Ka Dib Laba Kooxood Oo Ingiriis Ah Oo Ku Kulmaya...
11 Sanadood Ka Dib Laba Kooxood Oo Ingiriis Ah Oo Ku Kulmaya Final-ka Champion League Iyo Wacdarihii Ay Ku Dhigeen Barcelona Iyo Ajax
Kooxaha ka dheela horyaalka ingiriiska ee Tottenham iyo Liverpool ayaa iskugu soo hadhay ciyaarta kama dambaysta ee tartanka xiisaha badan ee Champion League.
Labadan kooxood ayaa si layaab leh ugu soo baxay final-ka tartanka kooxaha yurub ee Champion League ka dib markii ay qaab mucjiso ah uga soo talaabsadeen dhigooda Barcelona iyo Ajax oo ay wacdaro ku dhigeen lugtii labaad ee wareega afar dhamaadka.
Kooxda Liverpool oo lugtii hore ee wareega afar dhamaadka guul daro sadex gool iyo waxba ah kala soo kulantay Barcelona ayaa hab mucjiso ah ugu soo rogaal celisay ka dib markii ay lugta labaad ku marti galisay garoonka Anfield.
Liverpool ayaa afar gool iyo waxba kaga talaabsatay Barcelona taas oo noqotay taariikh cusub oo ay ka dhigtay kubada cagta aduunka, waxaana aad loo amaanay qaab ciyaareedka ay kooxda Liverpool soo bandhigtay.
Dhinaca kale kooxda Tottenham ayaa iyaduna xalay wacdaro ku dhigtay kooxda reer Holand ee Ajax oo ay marti u ahayd ka dib markii ay kaga talaabsatay sadex gool iyo laba.
Kooxda Totenham oo guuldaro la kulantay lugtii hore ee wareega afar dhamaadka oo ay martigelisay kooxda Ajax ayaa iska soo baday guul daradaasi ka dib markii ay booqatay lugta labaad.
Kooxda martida loo ahaa ee Ajax ayaa laba gool oo dardoori ah ka gaadhsiisay kooxda Totenham taas oo hoos u sii dhigtay rajadii ay qabtay kooxda reer Ingiriis, balse qaybtii labaad ee ciyaarta ayey soo laabasho cajiib ah samaysay kooxda Tottenham.
Ciyaaryahanka reer Brazil ee Lucas More ayaa kooxdiisa ku hogaaminayey ciyaarta kama dambaysta ah ee Champion League ka dib markii uu sadex gool oo si wacan looga soo shaqeeyey uu ka dhaliyey Ajax.
Kooxaha reer Ingiriis ee Liverpool iyo Totehham ayaa ciyaarta kama dambaysta ah isku arkaya magaalada Madrid 01/06/2019, iyada oo kooxaha horyaalka England oo iskugu yimaada Final-ka Champion League ay ugu dambaysay sanadkii 2008 oo ay iska horyimaadeen Man United Iyo Chelsea, waxaana la dhawrayaa kooxda ku guulaysan doonta kooban qaaliga ah.
Previous articleBerbera, maareeyaha dekadaha somaliland oo ka hadlay tadawarka dekadu samaysay iyo markabkii ugu waynaa oo abid kusoo xidha dekada
Next article“Kursiga Uu Ku Fadhiyo Dhakool Waxa Ku Hoos Jira Lafaha Kuwii U Dhintay Inuu Xildhibaan Noqdo”…..Siyaasi Cali Guray